Nanome Fitaterana Maimaimpoana Ny Mpamily Fiarakaretsaka Sy Ny Olon-tsotra Taorian’ny Fanafihana Tao Saint-Petersbourg · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2017 13:42 GMT
Tamin'ny Alatsinainy tolakandro, nisy fipoahana tao amin'ny Metro-n'ny Saint-Petersbourg ka nahafatesana olona miisa sivy ary olona ampolony mahery no naiditra hopitaly, nofaritan'ny manampahefana Rosiana sasany ho asa fampihorohoroana ny fanafihana na dia mbola tsy nanapa-kevitra ny amin'ny hoe iza no tompon'andraikitra, na inona no antony mety nanaovana izany aza ny manampahefana. Fotoana fohy taorian'ny nitrangan'ny fipoahana, nanakatona ny rafitra metro tao an-tanàndehibe ny manampahefana misahana ny filaminana ary nahita fitaovana fipoahana maro mbola tsy nipoaka teo amin'ny metro manodidina ka nanala izany avy hatrany.
Olona an'arivony no nihitsoka lavitry ny tranony vokatry ny fanakatonana ny metro nandritra ny ora fanatanterahana ny asa andavanandro. Kanefa nifanampy tamin'ny fomba lehibe ireo manampahefana tao Saint-Petersbourg sy ny olon-tsotra: ankoatra ny filazana tao an-tanàndehibe fa miasa maimaimpoana ny karazana fitateram-bahoaka hafa rehetra dia nifampitaona ihany koa ireo manana fiara sy ireo mpamily fiarakaretsaka manerana an'i Saint-Petersbourg tamin'ny fanampiana ny mpiaramonina aminy hanatitra azy ireo ho tonga soa aman-tsara any an-tranony.
Taorian'ny fipoahana, nanolotra fitaterana maimaimpoana ny mpamily fiarakaretsaka manerana ny tanàndehibe, sy ny orinasa mizara fitaterana Uber, Taxovichkof, ary Yandex.
Nanomboka nampiasa ny tenirohy # домой (#fonenana) tao amin'ny media sosialy ireo mponina izay tsy afaka nampiasa ireo tolotra ireo mba hanehoana fa mila vonjy izy ireo hodiana any an-tranony. Tao anatin'ny ora vitsivitsy, nampiasa ny tenirohy ireo mpiseran'ny media sosialy an'arivony tao amin'ny Facebook, VKontakte, ary Twitter .
Ho an'ireo rehetra izay tsy afaka miantso Yandex.Taxi, Uber, Taxovichkof: ampiasao ny tenirohy #fonenana ao amin'ny media sosialy. Mety hahita fiara maimaimpoana ianao miaraka amin'ny fanampiany .
Any ho any amin'ny 9 ora alina any. Handeha ho any Proletarskaya [Metro] aho miala eto amin'ny distrikan'ny Novocherkassy (Araben'ny Revolisiona). Afaka mitondra olona 3 aho mody.
Ao amin'ny vondrona VKontakte ” Lozam-pifamoivoizana sy Hamehana ao Saint-Pétersbourg” , efa ho olona miisa 1500 no nandefa fangatahana na nanolotra fitaterana tao anatin'ny adiny roa .
Aoriana kelin'ny amin'ny 8 ora alina, miala eo amin'ny toeran'ny fampisehoana mankany amin'ny loharanon'ny Sertolovo. Misy toerana roa .
Nilaza ny sasany fa tsy hitondra fiara izy ireo mba hamelana ny lalana ho malalaka amin'ny fifamoivoizana.
Handeha an-tongotra aho mody any an-trano androany, mba tsy hampitohana loatra ny fifamoivoizana. Ireo izay tsy vonona ny handeha an-tongotra mandritra ny adiny roa manerana ny tanàndehibe, aoka hifanampy ny tsirairay amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy #fonenana.
Nisy mihitsy aza ny namorona fantsona Telegrama antsoina hoe “fiara-fitaterana” natao manokana hampifandray ny olona mila fitaterana miaraka amin'ny mpamily. Manana mpikambana mihoatra ny 1.300 ny fantsona amin'izao fotoana izao .
Ny fantsona Telegrama “Fiara-fitaterana”.
Na dia maro aza ireo mpamily no nitatitra sy naneho ny hatsaram-pony, nisy kosa ireo hafa izay tsy mpanao asa soa: nitatitra ireo mpisera tao amin'ny media sosialy fa nisy ny mpamily fiarakaretsaka sasany izay miasa amin'ny orinasa nanome fitaterana maimaimpoana no nandà handray olona tafahitsoka tao an-tanàndehibe.
17 Septambra 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana